Namhlanje, ukucima iphepha kumagazini, okanye ukubukela i-toothpaste umboniso kwiTV, siye sacinga ngokuphindaphindiweyo ukuba singafezekisa njani umphumo wamanyo amhlophe. Kodwa, ukuba uqale, kufuneka uqaphele ukuba inani elininzi lezinto zichaphazela imeko yamazinyo, kubandakanya ukugujwa, imikhwa emibi, iindlela zokutya, amanzi, kwaye kubaluleke kakhulu, ukhathalela.
Oku kuxhomekeka kakhulu kwiinkathalo zomlomo, kwaye sinokuchaphazela ngqo le nto. Into ephambili kweli shishini kukuba uthenge i-toothbrush efanelekileyo, unamathele kwaye, ukuba kunokwenzeka, i-spray okanye i-mouthwash.
Okwangoku, kukho inani elikhulu lezintso, kunye nemiphumo eyahlukeneyo, kuquka i-toothpaste yamazinyo agcobayo, ama-toothpastes kunye nokungenawo umxholo we-fluor, i-toothpaste yabantwana nabanye.
Kodwa kule nqaku ndifuna ukuthetha ngokuthe ngqo malunga neengubo zokugcoba kubantwana. Ekubeni abantwana abancinci abanakukwazi ukukhetha ukuba iyiphi ipasta engcono kwaye yimbi ngakumbi ekukhethweni kwamathambo, kuya kuxhomekeka kumkhwa wokunyamekela amazinyo akho esikhathini esizayo. Ngaloo ndlela, kubantwana abancinane abangaphantsi kweminyaka engama-6, unokuthenga iintlobo zeentlobo ezikhethekileyo ezineziqhamo ezinonophelo kunye ne-flavour, kunye nabantwana abadala bangasebenzisa kakade iintsapho zezinyo. Kodwa into ekhunjulwayo ukukhumbula ukuba ngethuba lokuxubha umntwana wakho, into ephambili ukuyilawula, kuba umphumo wokulwa ne-antibacterial and remineralizing ofothinasti uqala emva kwemizuzu emi-2, ke qiniseka ukuba umntwana wakho uyayilandela ngokucokisekileyo imithetho yokucoca amazinyo.
Ukuxubusha inambuzane yabantwana abancinci, okhethekileyo, iimfuno ezongeziweyo zenziwe, ingakumbi ngokubhekiselele ekukhuselekeni, ukuba umntwana ugxobhe inyopho yokugcoba. Ukuze, xa kwenzeka umququ ewela esiswini, asinayo isifo esinetyhefu emzimbeni, akufanele iqulethe izinto ezinobungozi.
Kuza kubekho namhlanje, akukho nto yokugcoba i-toothpaste yabantwana abancinci, kwaye umcimbi wendalo wayo uvulekile. Okokuqala, inambuku yokugcoba abantwana kufuneka iqulethe i-fluoride yamathambo omtsha, avele esandula kubonakala, kwaye okwesibini, inambuzane yamazinyo ebantwaneni abancinci ayikwazi ukuqukumbela ngokugqithiseleyo, kuba ngexesha lokucoca, umntwana unako ukuginya unonongo.
Ngoko ke, ezi mfuneko zilandelayo zifakwe kumazinyo abantwana:
I-toothpaste ifanele ibe nomxholo ophantsi we-fluoride, ingakumbi ukuba le gxiba liza kucocwa ngabantwana abangaphantsi kweminyaka engama-6 ubudala. Ngoko, namhlanje, abaninzi abavelisi bakhiqiza i-toothpaste kwii-doses ezilahlayo. Umxholo we-fluoride kwisitampu sezintsana kufuneka ungadluli u-0.05%.
Inambuzane yamazinyo kubantwana abancinci kufuneka ibe yinto ephantsi. Ngako oko, kuba abantwana abancinci be-helium isilungele ngakumbi, ezifanelekileyo amazinyo okwethutyana kunye nokunyanzelwa kwe-eamel ephantsi.
Nangona kunjalo ukuba amazinyo eziqhamo kunye neziqhamo ezahlukeneyo zivelisa inkqubo yokucocwa kwezinyo kubantwana abancinci ngakumbi, nangona kunjalo ukungabikho kwamathandabuzo angathathi hlangothi akuyi kubangela umnqweno wokugwinya umlomo wezinyo.
Kwaye ngokwemvelo, inambuzane yokugcoba abantwana kufuneka ibe nembonakalo ekhangayo kwaye ikhululeke ukusebenzisa ngisho nabantwana abancinci.
Kwaye ekugqibeleni, kwakhona siyakukhumbuza, qaphela ukuba abantwana bakho bangagwinyi i-toothpaste, kuba abantwana abancinci bengayazi ukuba bahlambulule amazinyo abo, ngoko malunga ne-40% ye-paste igonywe. Ngaloo ndlela, awukwazi ukusebenzisa i-toothpaste yabantu abadala, kuphela xa befikelela kwiminyaka eyi-12 ubudala, usenokuba usasebenzisa i-toothpaste yasekhaya. Kwaye kubaluleke kakhulu, akukho mzekelo ukuba akuvumelekanga ukuba abantwana basebenzise amazinyo amhlophe.
Ukulahlekelwa kwesisindo kunye neprotheni: iinzuzo zeprotheni
Isobho sebarhasi kunye neeparele
Ikhefu "iMishka enyakatho"
Ukunyamekelwa kweenyawo, umlenze wobuhle bomlenze